ရည်းစားဟောင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် ဦးစီးကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်ကြောင့် လူပြောများသွားခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး - What's Today
ရည်းစားဟောင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် ဦးစီးကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်ကြောင့် လူပြောများသွားခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး – What’s Today
မကြာသေးမီက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဟာ ၎င်း၏ရည်းစားဟောင်း၏မင်္ဂလာပွဲ၌ ရယ်မောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့် လူသိများသွားခဲ့ပါတယ်။ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များဟာ ဇနီး၊ အဖော်၊ ရည်းစား သို့မဟုတ် သားသမီးရှိခြင်းရဲ့ အနှောင့်အယှက်များမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်၌ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ကတိသစ္စာပြုကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၎င်းတို့ထဲမှာမှ ဘုန်းတော်ကြီးမဖြစ်ခင်မှာ ရည်းစားထားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလည်း အနည်းနဲ့အများ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
မကြာသေးမီက Fr. Roniel El Haciendero အမည်ရှိဘုန်းတော်ကြီးဟာ ၎င်း၏ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ Korina ၏မင်္ဂလာပွဲကို သူမရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် ဘုန်းတော်ကြီးက သူမရဲ့သတို့သားဖြစ်သူရဲ့ ကောင်းချီးပေးမှုနဲ့ Korina က သူ့ကိုလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဝတ်ပြုရေးမှာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးဟာ ယခင်ကထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်း ၊ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲတွေကို ဦးစီးကျင်းပလာပေးခဲ့ပေမဲ့ ဒီပွဲဟာ သူ့အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းပါပဲလို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ထို့နေ့မှာ ဘုန်းတော်ကြီးက ” ကျွန်တော် စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်၊ ​​ကျွန်တော် ပွဲတွေအများကြီးကို ဦးစီးပေးခဲ့ပေမဲ့ ဒါက ကျွန်တော့်အတွက် တုန်လှုပ်စရာအကောင်းဆုံးဘဲ၊ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်၊ ဒီမှာ ချွေးတွေအရမ်းထွက်နေတယ်” ဟု ဧည့်သည်များကိုရယ်မောကာ ပထမဆုံးဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ဘုန်းတော်ကြီးက ဆက်လက်ပြီး “ မင်းက ဒီနေ့ကို အမှန်တကယ် စောင့်မျှော်နေခဲ့တာကြောင့် အခု မင်း ကောင်းမွန်စွာ လက်ထပ်နိုင်ပြီ Korina ၊ …. တကယ်တော့ Korina က ကျွန်တော့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းပါ။ ” လို့ ရုတ်တရက် ပြောထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပွဲလာဧည့်သည်တိုင်းကလည်း တဖြည်းဖြည်းရယ်စရာကောင်းလာတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးထံမှ ” မင်္ဂလာပွဲကိုရပ်လိုက် ” လို့ပြောလာမယ့်အသံကို သတိထားနေခဲ့ကြရပါတယ်။
ထို့နောက် “ ဒါပေမယ့် အတိတ်က ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ အခု ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ဘဝရှိနေပြီ။ ကျွန်တော်က ဘုန်းကြီးဖြစ်နေပြီ၊ ဒီနေ့တော့ Korina က လက်ထပ်တော့မှာပါ” ဟု ဆက်ပြောလာတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့် ပွဲလာဧည့်သည်တိုင်းက သက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆက်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးက ” စိတ်မပူနဲ့၊ ‘မင်္ဂလာပွဲကို ရပ်လိုက်’ လို့ ကျွန်တော်မအော်ပါဘူး ၊ ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုး ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ အဲ့မျိုးက ရုပ်ရှင်ထဲမှာဘဲ ဖြစ်တာပါ “ လို့ အရွှန်းဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးက ၎င်းမင်္ဂလာစုံတွဲဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အတွက် တကယ့်ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိပုံရပြီး၊ သူ့အတွက် “ အတိတ်က လွန်သွားခဲ့ပြီ ” လို့လည်း ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့အပြင် “ အခုတော့ ကျွန်တော် ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပျော်နေပြီး Korina ကလည်း သူမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဘဝနဲ့ ပျော်ရွှင်နေမှာကို ကျွန်တော်သိပါတယ် ၊ ဒီမှာ ခါးသီးတဲ့ စိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေ မရှိပါဘူး၊ လူတိုင်းက ပျော်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝရှိလာပြီဆိုရင်တောင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖေးမကူညီနိုင်ပါသေးတယ်။ “ လို့လည်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous Article နိုက်ကလပ်ထွက်တဲ့အခါတိုင်း ID ကဒ်ကိုအမြဲမေ့နေတက်လို့ လက်ဖျံပေါ်မှာ တက်တူးထိုးထားခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ဦး
Next Article ဇနီးႏွင့္သားတစ္ဦးပင္ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အတန္းပညာမ်ားကို ႀကိဳးစားသင္ယူကာ ပညာမ်ားကို ဆက္လတ္ဆည္းပူေနသည့္ ၈တန္းေက်ာင္းသားေလး